जाडोमा बढ्दै छालाको समस्या, के छ समाधानको उपाय ? - चौतारी पोष्ट अनलाइन
काठमाडौं,कात्तिक ३०, २०७८
अर्का छालारोग विशेषज्ञ डा. धमेन्द्र कर्णले जाडोमा छाला रुखो, फुट्ने, सुक्खा हुने समस्या हुनुका साथै छाला चिलाउने, छालाको पत्र निस्कने, अनुहारमा चायाँ, पोतो आउने समस्या हुने जानकारी दिए । डा. कर्ण पर्याप्त मात्रामा पानी वा झोलिलो खानेकुरा खानुका साथै अनुहारमा तातोपानीको वाफ लिनु उपयुक्त हुने बताउछन्। छाला स्वस्थ राख्ने भन्दा हामी छालाको बाहिरी स्याहारमा मात्र ध्यान दिन्छौँ तर यसमा आन्तरिक रूपले नै सचेत हुनुपर्छ ।गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
Prevउपभोक्ता समितिमार्फतको काम रोक्दा पुँजीगत खर्चमा असर
Next५ अर्ब ५३ करोड ठगीको जाहेरी